DEG DEG:- Kulan hordhac ah oo ay goordhaw wada yeesheen Ugaas Xasan iyo madaxweynaha Hirshabeele – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Kulan hordhac ah oo ay goordhaw wada yeesheen Ugaas Xasan iyo madaxweynaha Hirshabeele
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goordhaw ay halkaasi kulan hordhac ah ku yeesheen madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo Odayaal uu horkacaayo Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Kulankaas oo muddo kooban socday ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid ay dibad-joog ka ahaayeen saxaafadda iyo xubnihii la socday madaxweynaha Hirshabeele oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ah.
Warar hordhac ah oo aynu ka heleyno waxa kulankaasi looga hadlay ayaa sheegaya in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu shuruudo adag hor-dhigay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Shuruudahaasi ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin sida soo socoto:-
1- In loo madax-banaaneeyo soo xulidda xubnaha Aqalka Sare ka imaanaya gobolka Hiiraan, maadaama uu isaga ka mid yahay 135 oday dhaqameed.
2- In madaxweyne Xasan Sheekh uu faraha kala baxo soo xulidda xildhibaanada.
3- In xubnahaasi dhamaan lagu soo xulo magaalada B/weyne.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegayaa inuu shuruudahaasi ka aqbalay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, inkastoo aan la ogeyn waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrinkaasi ka dhihi doonno, maadaama uu isaga jecel yahay in arrinta soo xulista Aqalka Sare uu gacan ku yeesho.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu cadeeeyo mowqifkiisa ku aadan taageeridda uu siinayo maamulka Hirshabeele iyo inuu ka qeyb-gali doonno caleemo saarka madaxweynaha maamulkaas cusub Cali C/laahi Cosoble, oo dhawaan ka dhici doonno magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.